CENI : Efa tsara lamina ireo dingana arahina hoenti-miatrika ny fifidiananany fifidianana
Mifantoka tanteraka ho amin’ny fahatanterahan’ny fifidianana madio, milamina sy eken’ny rehetra ireo rantsa-mangaika natao hisahana izany amin’izao fotoana izao. 12 septembre 2018
Manamafy ny rehetra fa tsy misy afa-tsy ny fifidianana irery ihany no vahaolana ho an’i Madagasikara, ary vao nanamafy izany indray ny teo anivon’ny vondrona iraisam-pirenena tamin’ny alalan’ny fanambaràna navoakany afak’omaly maraina.
Manoloana izany indrindra dia manao ny ezaka mba hahatomombana izany fikarakarana izany ihany koa ny eo anivon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny Ceni.
Fantatra fa efa saika tsara lamina avokoa ankehitriny ireo dingana rehetra arahina hoenti-miatrika ny fifidianana. “Ny dingana hatrehintsika izany izao amin’ny fanomanana ny fifidianana dia ny voalohany ny fametrahana fivoriam-be vaovaon’ny Céni izay ahitana mpikambana 45 ary 36 solontena avy amin’ny kandidà tsirairay avy. Mandra-pivoakan’ny voka-pifidianana vonjimaika izany dia miasa io fivoriamben’ny Céni vaovao io.
Ny faharoa dia andrasana ny fanendren’ny kandidà tsirairay ny mpitantam-bola sy ny mpitantana ny kaontiny izay voalazan’ny lalàna fa tsy maintsy hananan’ireo kandidà tsirairay avy mba hitantanana ny vola miditra sy ny vola mivoaka amin’ny fampielezan-kevitra”, hoy ny fanazavana noentin’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry. Ankoatra izay dia nambaran’ity farany ihany koa fa tsy maintsy hojerena manokana ny fanomezana vahana ireo kandidà tsirairay avy ao amin’ny haino aman-jery mandritra ny fampielezan-kevitra.
“Ho an’ny haino aman-jerim-panjakana dia efa mihatra tamin’ny vanim-potoana nivoahan’ny lisitr’ireo kandidà ny tokony hanajany ny fehin-kevitry ny ara-drariny sy ny fifandanjana. Manomboka amin’ny 8 oktobra dia tsy maintsy mampihatra izay fehin-kevitry ny fitoviana ny haino aman-jerim-panjakana”, araka ny fanazavana noentiny hatrany. Nanamarika ny filoha lefitry ny Céni fa ny tsy fanarahan’ireo kandidà izay dingana sy lamina efa napetraka dia mety hitarika any amin’ny fanasaziana.